ကလေးဝမြို့တွင် နှစ်စဉ်မြစ်ရေတို က်စားမှု ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံး မှုများကို ကာကွယ် နိုင်ရန် ? - Yangon Media Group
ကလေးဝမြို့တွင် နှစ်စဉ်မြစ်ရေတို က်စားမှု ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံး မှုများကို ကာကွယ် နိုင်ရန် ?
ကလေး၊ ဇန်နဝါရီ ၂၃- စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး ကလေးဝမြို့တွင် နှစ်စဉ်မြစ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ကာကွယ်နိုင် ရန် မြစ်သာမြစ်ရေ တိုက်စားမှုကာ ကွယ်ရေးအတွက် ကျောက်စီမြေထိန်း နံရံများကို တည်ဆောက်လျက်ရှိ ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရေ အရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုး ရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ကလေးဝမြို့သည် ချင်းတွင်း မြစ်နှင့်မြစ်သာမြစ်ပေါင်းဆုံရာမြစ် ကမ်းပေါ်တွင် မြို့တည်ထားခြင်းဖြစ် ရာ နှစ်စဉ်နှစ်ဖက်မြစ်ရေတိုက်စားမှု ကြောင့် မုဋ္ဌောစွန်းမြေနေရာများ၊ မြစ် သာမြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်ရှိ ချစ်ကို ကိုလမ်းထိပ်မှစ၍ မြစ်သာမြစ်ကမ်း နားလမ်း၊ ချင်းတွင်းမြစ် သင်္ဘောဆိပ် နေရာများ နှစ်စဉ်ရေတိုက်စားမှု ကြောင့် ပြိုကျပျက်စီးလျက်ရှိရာ ရေ တိုက်စားမှုကာကွယ်ရေး ကျောက်စီ မြေထိန်းနံရံများကို ဖေဖော်ဝါရီလ ဆန်းတွင် အပြီးတည်ဆောက်သွား မည်ဖြစ်သည်။
“”ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုငွေ ကျပ်၂၄သန်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းမှာ အပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်သလို အခု ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း အရှည် ၄၇ ပေ၊ အနံ သုံးပေ၊ အမြင့် လေးပေခွဲရှိတဲ့ ရေကမ်းထိန်းတစ်ခု ကိုလည်း ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းပါ တယ်””ဟု အနောက်မြောက်ညီအကို များ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှ တာ ဝန်ခံဦးမျိုးမင်းထွေးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ကလေးဝမြို့ရှိ ချစ်ကို ကိုလမ်းထိပ် မြစ်သာမြစ် ရေတိုက် စားမှုကာကွယ်ရေး ကျောက်စီမြေ ထိန်းနံရံ တည်ဆောက်မှုမှာ အလျား ပေ ၁၀၀၊ အနံပေ ၅ဝဖြစ်ပြီး ကျောက် စီနံရံထိန်းတိုင်များ ပါရှိကြောင်း၊ ချင်းတွင်းမြစ်သင်္ဘောဆိပ်(အခွန် ဦးစီးရုံးရှေ့) ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံ ကို ဝေလျှံကျော်ကုမ္ပဏီမှ ငွေကျပ် ၂၄ ဒသမ ၂၅သန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြစ်သာမြစ်(သိမ်ဘုရားအနီး)တွင် ကောင်းသစ်မင်းကုမ္ပဏီမှ ၄၁ ဒသမ၂၂၅ သန်းဖြင့်လည်းကောင်း မြစ်ရေတိုက်စားမှုကာကွယ်ရေး ကမ်းထိန်းနံရံများ တည်ဆောက် လျက်ရှိရာ ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းတွင် ပြီးစီးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သမိုင်းမှတ်တမ်းတွင် လိုက်ဟဲဗီး ဝိတ်တန်း ရွှေခါးပတ် ချန်ပီယံ အဖြစ်ပါ ရေးထိုးချင်သည့် မစ်ဒယ်??
ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ တစ်မြို့နယ် ကျပ်သန်း ၂၆ဝ စီ ခွဲဝေ သုံးစွဲခဲ??
အရည်အသွေး မမီသော အလှကုန် ပစ္စည်းများအတွက် ကြော်ငြာပေးခဲ့သော ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူ သရုပ်ဆောင် ၅
ကျောင်းနေရွယ် ကလေးများ ကျောင်းအပ်နှံမှုများ အဆင်ပြေစေရန် မွေးစာရင်း၊ သန်းခေါင်စာရင်းများ ??
၂ဝ၁၇ – ၁၈ခုနှစ် ဒုတိယခြောက်လပတ် အခွန်ရရှိမှု ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ် ကာလတူထက် ဘီလီယံ၂ဝဝကျော် လျော့နည်း
ရွှေတစ်ကျပ်သားကို ၁၂၈ ရွေးစံနှုန်းညီ အလေးချိန်အတိုင်းရောင်းကြရန် တိုက်တွန်းထား